Doorashada Kursiga uu ka dhintay Siraaji oo ka dhaceysa magaalada Kismaayo - Caasimada Online
Home Warar Doorashada Kursiga uu ka dhintay Siraaji oo ka dhaceysa magaalada Kismaayo
Doorashada Kursiga uu ka dhintay Siraaji oo ka dhaceysa magaalada Kismaayo
Kismaayo (Caasimada Online)-Waxaa maanta oo Khamiis ah lagu wadaa in magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ay ka dhacdo doorashada mid kamid ah Kuraasta Golaha Shacabka ee faaruqa ah.
Doorashada ayaa waxaa ku tartami doona musharaxiin dhowr ah, waxaana Kursiga loo tartamaayo horay u baneeyay Marxuum Cabaas C/laahi Sheekh Siraaji oo sanadkii hore lagu hor dilay Villa Somalia.
Xubnaha ku tartami doona doorashada ayaa waxaa kamid noqon doona wiil la dhashay marxuumka oo isaga la saadaalinaayo inuu qaban doono xilka.
Sidoo kale, Guddiga Madaxa Banaan ee Doorashooyinka, ayaa sheegay in ay shalay bilaabeen hubinta Ergooyinka, sidoo kalena ay xaliyeen wixii tabasho ah, islamarkaana doorashada maanta ay ku dhaceyso sidii loogu talo galay.
Docda kale, doorashada ayaa u muuqaneysa mid ay guusheeda u janjeeri doonto wiilka la dhashay Marxuumka oo ay wadato dowlada Somalia.